Madaxweynaha Somaliya mudane Farmaajo oo markiisii ugu horeeyey ka qeyb galaya shirka Golaha Guud ee. – Kismaayo24 News Agency
Madaxweynaha Somaliya mudane Farmaajo oo markiisii ugu horeeyey ka qeyb galaya shirka Golaha Guud ee.
by admin 8th September 2019 073
Madaxweynaha Dowlada federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeesay sanadkan ka qeyb galaya Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey oo dhamaadka bishan ka dhacaya magaalada New Yourk ee dalka Mareykanka.
Wasiirka Qorsheynta Xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa xaqiijiyay in sanadkan Madaxweyne Farmaajo Soomaaliya ku matalayo shirka golaha guud ee Qaramada Midoobay.
Madaxweyne Farmaajo ayaana shirka ka jeedin doona khudbad dheer uu uga hadlayo xaalada Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hor marada iyo guulaha ay dowlada gaartay intii uu talada hayay.
Farmaajo ayaan ka qeyb galin shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey labadii sano ee lasoo dhaafay sababo la xariira dhalashada dalka Mareykanka uu heestay, hasa ahaatee Madaxweynaha ayaan dhawaan dib u celiyay dhalashadii Mareykanka uu heestay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa caqabad waxa ku ahaa ugana baaqsaday kulamadii hore ee Qaramada Midoobay heesashada Baasaboorka Mareykanka, maadaama uusan xasaanad ku heleyn baasaboorkaasi lana mid noqon lahaa muwaadiniinta caadiga ah.
Ceel-Baraf oo lagu xiray ergo kasoo laabatay deeganada Alshabaab maamulaan
SAWIRO: Shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo ka socda Dhuusomareeb iyo Ergoyinka oo ka qeyb galaya.
War Cusub: Diyaarado Dagaal oo Duqeyn ka geestay Deegaano ka tirsan Maamulka Soomaliland
Tifaftiraha K24 15th November 2016
Top News: Akhriso Magacyadda rag Puntland ay dil Toogasha ah ku xukuntey.
Goormee dowladda qadar si toos ah u bilaabeysa mashaariicda horumarineed ee 200 Milyan ay ku baxeyso?